प्रधानमन्त्री ओली बिरूद्व पर्दशन गर्नेलाई साउदि सरकारद्वारा मुद्वा – Paluwa Khabar
प्रधानमन्त्री ओली बिरूद्व पर्दशन गर्नेलाई साउदि सरकारद्वारा मुद्वा
कार्तिक १५, २०७७ शनिबार 39
काठमाडौं, १५ कात्तिक । साउदी अरबमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नाराबाजी गर्ने नेपाली नागरिकलाई स्थानीय प्रशासनले मुद्दा चलाएको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा साउदी पुगेका नेपाली नागरिकहरुले नेपाल सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै रियादमा प्रदर्शन गरेका थिए ।
भदौ २१ गते स्वदेश फर्कन नपाएका उनीहरुले एक कम्पनीमा प्रदर्शन गरेका थिए । जसमध्ये एक नेपालीलाई शान्ति तथा सुरक्षाको मुद्दा लागेको बताइएको छ । सउदीको कानून अनुसार सार्वजनिक स्थानमा नाराबाजी तथा प्रदर्शन गर्न पाइदैन ।
उता साउदीस्थित नेपाली राजदूतावासले भने मुद्धा लागेका नेपाली श्रमिकलाई माफी दिलाएर स्वदेश फर्काउन पहल भइरहेको जनाएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण साउदीमा धेरै नेपाली श्रमिकहरु नेपाल फर्कने तयारीमा छन् । यसअघि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु प्रतिबन्ध लगाइएका कारण नेपालीहरु स्वदेश फर्कन सकेका थिएनन् ।
Prevबारबर्दियामा सातवटा ठुला सडक कालाेपत्रे गरिने, सगुन मार्गमा कालाेपत्रे शुरू
Nextपशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरून। हेर्नुहोस् आज कार्तिक १६ को राशिफल
मलेसियामा सु’ तेकै अवस्थामा एक नेपालीको मृ’ त्यु
माधव नेपालले अन्तिममा दिए धोका! बैठकमा यस्तो सुनेर देउवा परे छक्क
च्याम्पियन्स लिग बराबरिमा राेकियाे
एसईई र कक्षा १२ का विद्यार्थीलाई भर्खरै आयो यस्तो सूचना
१.	आधा घण्टा अघि यस्तो तस्बिर राखेकी डा. दीपाको भयो दु’खद् नि’धन (भिडियो हेर्नुस्) (78)
७.	दशै मा फेरि कार र मोटरसाइकल ठोक्किदा दुईजनाको मृ’त्यु, तीन घा’इते (54)
८.	विप्लवका दाई वीरजङ्गको मृ’त्यु हार्दिक श्रदा’न्जलि (54)